दसैंको खानपान: कस्तो मासु स्वस्थकर ? – Nepal Press
२०७८ असोज २६ गते ६:४९
काठमाडौं । दसैँलाई हामीमध्ये धेरैले मीठो खाने र राम्रो लगाउने चाडका रुपमा बुझ्छौं । अझ मांसाहारीका लागि त यो चाड मासु खाने पर्व नै हो भन्दा नि फरक पर्दैन । दसैंमा हुनेखाने र हुँदा खाने सबैकोमा मासुको परिकार बन्छ ।
तर, एकैपटक धेरै परमिाणमा मासु हुने हुनाले स्टोर गर्न नजान्दा साथै सही समयमा सही तरिकाले पकाएर खान नजान्दा मीठो र शरीरका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनयुक्त मासुले उल्टै हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँछ । स्वास्थ्य विज्ञहरुले स्वस्थकर मासुका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
मासुमा हामीले सामान्यतया खसी, बोका, भेडा, च्याङग्रा, कुखुरा, राँगा, सुँगुर, हाँस, तथा माछा खान्छौं । खानपानका सानोतिना कुरामा ध्यान नदिँदा चाडवाडका बेला अस्पताल नै पुग्नुपर्ने पनि हुन्छ । हामीले खाने मासु कत्तिको स्वस्थयकर छ र कस्तो मासु खानुपर्छ भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक रहेको वरिष्ठ फिजिसियन एंव मुटुरोग विशेषज्ञ डा.विनोदकुमार दाहाल ।
डा. दाहाल सेतोको तुलनामा रातो मासुुले स्वास्थ्यलाई खराब गर्ने भए पनि रातो मासु थोरै परमिाणमा मिलाएर खान सकिने बताउँछन् । मुटु, कलेजो, मिर्गौला रगतमा समस्या देखिएका तथा ब्लडप्रेसरलगायतका दीर्घरोगीले सकेसम्म मासु नखाँदै राम्रो हुने उनको सुझाव छ । खानु परेमा पनि ठीक्क शरीरलाई चाहिने मात्रा दिनको २/४ पिस खानुपर्ने दाहालले बताए ।
मासु खाँदा कुन-कुन कुरामा ध्यान दिने
मासु खाँदा आफूले खाने मासु कत्तिको स्वस्थकर छ त्यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । थोरै खाने तर गुणस्तरको मासु खानु नै सबैका लागि उपयोगी छ । पशुपन्छी पनि स्वस्थ हुनुपर्छ, दसैंमा मासु धेरै हुने भएकाले एकैपटक पकाएर राख्ने र धेरै दिन लगाएर खाने चलन छ ।
तर, यसरी मासु एकैपटक पकाएर बिस्तारै खानु राम्रो नहुने चिकित्सकको भनाइ छ । पाकेको मासु लामो समय खाँदा विभिन्न किटाणुले आक्रमण गर्ने भएकाले आलो मासु समय-समयमा पकाएर खाँदा राम्रो हुन्छ । चाडपर्वका नाममा जथाभावी रुपमा काटेको मासु अत्यधिक खाएमा यसले आर्थिक र शारीरिक क्षति समेत गर्छ ।
फ्रिज हुनेले चाहिँ मासु पकाएर राख्नुभन्दा डी फ्रिजमा आलो मासु राखेर आफूलाई चाहेको बेलामा पकाएर खान सकिन्छ । पकाएर राखेको मासुभन्दा फ्रिजमा राखेको आलोमासु बढी स्वस्थकर हुने विज्ञ बताउँछन् । मासु खाँदा एकैपटक धेरै मासु खानुभन्दा समय-समयमा थोरैथोरै खानु राम्रो हुन्छ ।
अस्वस्थ्य र मासुको बढी प्रयोगको असर
माछामासु खानु हानिकारक होइन । तर, हामीले खाने तौरतरिका र जीवनशैलीले स्वास्थ्यको निर्धारण गर्छ । बोसो धेरै नभएको छालारहित र धेरै तारेको हुनु नहुने चिकित्सकको भनाइ छ ।
किनेर या घरमै काटेको मासु हल्का गुलाबी रंगको छ भने त्यसमा केही खराबी हुनसक्छ हरियो र प्याजी रंगको भएमा त्यो मासु खान अयोग्छ छ भनेर बुझ्नु पर्छ । साथै, दसैंमा खसी किन्दा सिंगान बगेको, स्वस्थ प्रमाणित नगरेको पशुपन्छी खान हुन्न ।
प्रकाशित: २०७८ असोज २६ गते ६:४९